VevoCart: Muuqaal buuxa oo ASP.NET Ecommerce Platform | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 21, 2013 Isniin, Oktoobar 21, 2013 Douglas Karr
Ku dhis meheraddaada tooska ah madal VevoCart waxaadna heleysaa dukaanka elektaroonigga ah oo si buuxda u muuqda oo si heer sare ah loo qaabeyn karo, loo qiyaasi karo oo si buuxda loo habeyn karo oo leh ASP.NET C # lambar koodh lagu daray. Si fudud ayaad u awoodaa ku rakib VevoCart adoo adeegsanaya rakibaadaha shabakadda Microsoft Web Platform or soo qaado toos ah.
Naqshadeynta Jawaabta / Diyaargarowga Mobilada - VevoCart wuxuu la yimaadaa naqshad jawaab celin ah, naqshadeynta oo ku habboon aalad kasta hadey tahay desktop, laptop, tablet, ama taleefanka gacanta. Iyadoo VevoCart, uma baahnid inaad ka walwasho naqshadaynta aalado kala duwan oo iswaafajiya mar dambe.
PA-DSS Waa la xaqiijiyay - VevoCart waa codsi eCommerce waafaqsan ASP.NET PA-DSS. VevoCart waxay ku shaqeysaa lacag bixinta iyada oo loo marayo VevoPay oo uu si buuxda u hubiyey qiimeeyaha aqoonta u leh waana codsi bixinta lacag bixinta ee PA-DSS.
Taageero Bakhaarro Badan - nooca VevoCart Multi-Store ayaa u oggolaanaya ganacsatada inay ku shaqeeyaan dhowr dukaanno leh magacyo kala duwan oo wadaagaya hal xog-ururin iyo habka lacag-bixinta dhexe.
Qalab Suuq Geyn - Qalabka suuqgeynta VevoCart waxaa loogu talagalay inuu noqdo mid jajaban oo la qaadi karo si loo taageero noocyada ugu badan ee ololayaasha suuqgeynta. Qalabkani wuxuu u oggolaanayaa shirkaddaada inay soo jiidato macaamiil badan, dhisto daacadnimadooda, abuuraan kalsooni iyo aqoonsi sumcad.
Tilmaamaha eCommerce oo dhameystiran - Waxaad ku dari kartaa qaybo iyo alaab aan xadidnayn. Waxaa jira astaamo dhowr ah oo alaab ah oo aad dejin karto. VevoCart sidoo kale waxay taageertaa dukaamo badan iyo luuqado badan. VevoCart waxay la midowdaa dhowr markab iyo shirkadaha lacag bixinta ee internetka. Astaamaha kale waxaa ka mid ah qalabka suuqgeynta, warbixinnada falanqeynta, dejinta muujinta, boggaga waxyaabaha ku jira, iyo inbadan.
Naqshadeynta Horudhaca ah ee Premium - VevoCart waxay la timaadaa naqshado casri ah oo casri ah oo ka dhigaya websaydhkaaga mid umuuqda mid rasmi ah oo la isku halleyn karo, kaas oo kaa caawin doona martidaada inay macaamiisha kuu noqdaan
Guddi Admin awood leh - Gudiga Maamulka VevoCart wuxuu ku siinayaa kontarool buuxa shabakadaada. Gudigu wuxuu awood kuu siinayaa inaad si fudud u maamusho dukaamadaada, alaabadaada, amarrada, macaamiisha, rarka iyo hababka lacag bixinta.
Dukaanka Facebook Commerce Facebook waa muuqaalka u oggolaanaya ganacsatada inay ku daraan dukaan ku yaal bogga taageerayaasha Facebook. Macaamiisha ka diiwaangashan bogga taageerayaasha ayaa dukaamaysan kara dhammaan alaabooyinka sida ay ugu sii nagaan karaan websaydhka dukaanka.
Daabacaadda eBay eBay waa mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee lagu iibiyo wax soo saarkaaga iyo adeegyadaada. Ku liis garaynta alaabadaada eBay lama iloobi karo! VevoCart waxay ku siineysaa agab liiska eBay ah, tani waxay si wax ku ool ah uga caawin doontaa sare u qaadista iibkaaga.
SEO & SMO saaxiibtinimo - VevoCart waxay bixisaa muujinta canonicalization URL si loogu muujiyo URLka aad doorbideyso makiinadaha raadinta. Noocyada Dukaan-dhowrka ah, baayacmushtariyaashu waxay dejin karaan "Bakhaar La Doorbiday" si ay u muujiyaan in badeecadaha iyo bogagga qaybta loo gudbiyo bogga kaniisadda ee dukaanka la xushay.
Source Code - Oo ay kujirto VevoCart waxaa kamid ah ASP.NET koodhka ilaha iyadoo la adeegsanayo keyd MSend SQL 2005. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad wax ka beddesho koodhka ilaha oo aad si fudud ugu dhereriso shaqadiisa.
Kharashka Shatiga Hal Mar - Lacag La'aan socotaa Hal mar oo rukhsad ah ayaa kuu oggolaaneysa inaad isticmaasho alaabtaada VevoCart illaa iyo inta aad rabto. Lacag bixin bille ah. Ma jiro ujrada macaamil ganacsi.
Tags: asp.netc#jajabecommercehannaanka ganacsigagawaarida wax iibsiga ee microsoftgaadhigiina shoppingvevocart
CampaignAlyzer: Raad-raac iyo Fulinta Ololayaasha Falanqaynta